UJJ Benítez: ngumbhali emva kweCaballo de Troya | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, Iincwadi
UJJ Benítez yenye yezona ntatheli zidumileyo nezitolikwa kakhulu ngabapapashi baseSpain nababhali bexesha lonke. Nangona wayesaziwa phantse kuyo yonke iplanethi evela kwisaga ekhethekileyo, UTroy Horse, ikwaphuhlise umsebenzi wobuntatheli ophumeleleyo. Ubungqina boku kukwamkela ikhondo lomsebenzi wakhe obanzi ngeMbasa yeNtatheli ye-Navarra ye-2021.
Ngakolunye uhlangothi, UBenítez unikele uninzi lobomi bakhe ekusombululeni iimfihlakalo (ikakhulu inxulumene ne-ufology). Ngapha koko, ngasekupheleni kweminyaka yee-70 wagqiba kwelokuba abuyeke ubuntatheli bobuchwephesha abonakalise ukuthanda kwakhe ii-UFOs. Ukuza kuthi ga ngoku, umbhali waseNavarrese uthengise iikopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-15 phakathi kwezincoko, iinoveli eziyinyani, izicatshulwa zophando kunye nemibongo.
1 Isaga yeTrojan Horse
1.1 IYerusalem (1984)
1.1.1 Ezinye iincwadi zoluhlu lweTrojan Horse
2 Mna, uJules Verne (1988)
3 Ii-UFO zam endizithandayo (2001)
4 Intlekele eNtsundu (2020)
5 I-Biography kaJJ Benítez
5.1 Amaxesha entatheli
5.3 Iimpawu zeencwadi zikaJJ Benítez
5.4 Uluhlu lweenoveli zikaJJ Benítez
7 UJJ Benítez namhlanje
I saga UTroy Horse
Olu luhlu lubeka uhambo ngokuhamba kwexesha Injongo yakhe kukwazi "obona bomi" bendoda eyaziwayo kwimbali yoluntu: uYesu waseNazarete. Ngengxabano enjalo, impikiswano yayingaphaya kokuqinisekiswa. Ngenxa yoko, uBenítez waphumelela inani eligxekayo labagxeki, ngakumbi kwiCawa yamaKatolika kunye namazwi obuKristu alondolozayo.
Nangona kunjalo, ayinakuphikwa loo nto UTroy Horse Iyaxatyiswa njengodidi loncwadi eSpain. Ngokuqinisekileyo, ukusukela ekupapashweni komthamo wokuqala kwi-1984, iyelenqe layo sele likho kwimibono yaseSpain. Okwangoku, le saga inemikhosi yabalandeli kwihlabathi liphela; Ubungqina boku ngamaqela amaninzi kunye neeforamu kuthungelwano lwentlalo.
Qalisa uhambo oludlulileyo; umfundi usiwa kwi-AD 30, ngakumbi phakathi kuka-Matshi 30 no-Epreli 9. Iziganeko zichazwe kwizahluko ezilishumi elinanye, inye ngosuku. Incwadi iphakamisa imibuzo engaphezu kwekhulu kunye nokubonakaliswa (ezinye zazo zinameva) malunga nomlinganiswa ozincamileyo wabangela ubuKristu.
EYerusalem. Ihashe ...
Ezinye iincwadi zoluhlu lweTrojan Horse
Mna, Jules Verne (1988)
Ngokumalunga nefuthe lakhe loncwadi, umbhali Pamplona Uvakalise ukuphinda awuxabise umsebenzi kaJules Verne. Ngapha koko, uBenítez wenza uhlalutyo olunzulu malunga nombhali ongumFrentshi kunye nombhali wemidlalo edlalwa, ngelo xesha eyamenza walungela ukuba “ngumboni”.
Ngamazwi kaBenítez, Mna, Jules Verne yincwadi ethi ijolise ukubonisa "ubuso obufihliweyo" be indoda ethathelwa ingqalelo ngabaninzi "Umprofeti wenzululwazi." Ngaphandle kwamathandabuzo, isicatshulwa esikhetheke kakhulu xa sithelekiswa nayo nayiphi na enye egxile kubomi, inkuthazo kunye nomsebenzi wombhali waseFrance.
Mna. UJulio Verne
IiUFO zam endizithandayo (2001)
Umthamo wesibini wengqokelela Phantse iincwadi zamanqaku eziyimfihlo, eIsicatshulwa esibalulekileyo kwii-ufologists, ngokweengcali kule ndawo yophando. Umxholo wayo onomdla-ibonakala ibhalelwe abaphulaphuli abancinci-igubungela ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu yophando olwenziwe nguBenítez.
Kwelinye icala, le ncwadi ibonelela umfundi ngaphezu kwe-450 yemifanekiso, eyi-110 engqinelana nemizobo yombhali. Ukongeza, imifanekiso engashicilelwanga iyaboniswa (njengomzobo wabanye oosomajukujuku kwiminyaka engama-29.000 eyadlulayo, umzekelo). Ngokulinganayo, UBenítez utyhola iNASA njengeziko elixokayo kwaye enze amaqhina anomdla; enye yazo ithi "kutheni ungabuyanga enyangeni?"
IiUFO zam endizithandayo (i ...
Intlekele emthubi (2020)
Intlekele emthubi lolona papasho lwakutsha nje lweBenítez, Owayilungiselela inqanawa yokuhamba ngenqanawa xa kwaqhambuka ubhubhane weCovid-19 eYurophu. Malunga nale ncwadi, umbhali wathi:ngumzobo onomdla wengqondo abantu, abanye abantu bezizwe ezithile bakholelwa ukuba bangaphezulu kwezinye, bajonge kuwe ngendelelo yokwenyani, kodwa bebesoyika njengathi "...
Ngakolunye uhlangothi, igama "tyheli" kwisihloko libhekisa kwimvelaphi (ngokunokwenzeka ngokwe-WHO) Intsholongwane yasetshayina etshintshe ngokupheleleyo ingqikelelo "yesiqhelo" ngenkulungwane yama-XNUMX. Ke ngoko, le ncwadi ibonakalisa indlela uloyiko lokufa olungakhethi buso kwezentlalo okanye indawo yemvelaphi.
Intlekele enkulu ...
I-Biography kaJJ Benítez
NgoSeptemba 7, 1946, uJuan José Benítez wazalelwa ePamplona, ​​eSpain. Ukususela ebusheni bakhe wayesebenza kurhwebo olunxulumene nokupeyinta kunye neseramikhi. Njengoko ebetshilo, wayehlala eyinkwenkwe enomdla kwaye enomdla wokufumanisa ukuba kwenzeka ntoni macala onke kuye. Akunanto, Wagqiba ekubeni afunde iSayensi yoLwazi kwiYunivesithi yaseNavarra (waphumelela ngo-1965).
Ngayiphi na imeko, ubukrelekrele baseSpain abukhange buwukhanyele umba, nokuba ungaphikiswa kangakanani wawuthathelwa ingqalelo luluntu. UBenítez khange akhathalele kakhulu ngamazwi abuza ukungabikho kobungqongqo bezenzululwazi kwaye emtyhola ngokuba engacacanga kakhulu. Nangeyiphi ndlela, izigidi zabafundi kwihlabathi liphela sele besazi iindlela zakhe zophando.
Emva kokuphumelela kwiDyunivesithi yaseNavarra, UBenítez waqala ukusebenza ngo-1966 kwiphephandaba Inyani, eMurcia. Emva koko yahamba IHerald ukusuka eAragon kunye IGazethi yaseNtla Ukusuka eBilbao. Kwimithombo yeendaba ekhankanyiweyo usebenze njengomthunywa okhethekileyo kwiindawo ezahlukeneyo eYurophu kwaye wajikeleza ilizwe jikelele.
Ngexesha le-1970s, intatheli yaseNavarrese wagxila kumsebenzi wakhe wobuntatheli obhekisa kufology (Okwangoku ithathwa njengegunya lehlabathi kulo mbandela). Ngokudibeneyo, wagqiba uphando kwiTurin Shroud kwaye waqokelela amaxwebhu kuMkhosi woMoya waseSpain ngokubonakalayo kweUFO.
Ngomnyaka we-1979 uBenítez washiya ngokucacileyo ubuntatheli obusemthethweni ukuba azinikele ngokupheleleyo kuphando lomdla wakhe. Ukuba ziinkqubo zenjongo yokufundisa, ubukrelekrele obuvela ePamplona baqala ukupapasha izigqibo zemibuzo yakhe. Ke, Ayisiyonyani ukuthi uphando lumenze ukuba abe ngumbhali, ngeencwadi ezingaphezu kwe-60 ezipapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
UBenítez uxele amaxesha amaninzi ukuba ukubhala kufuna ukwazi indlela yokubalisa ibali. Kule ndawo, Kuyacaca ukuba wafunda ukugqithisa ukuthanda kwakhe iziganeko zobuntu okanye kunzima ukuyiqonda. Ke, ukupapashwa kwakhe kokuqala kwavela: Ii-UFOs: i-SOS kuLuntu (1975), ilandelwa ziincwadi ezinamanani entengiso afanelekileyo anje ngesincoko Oosomajukujuku bakaYehova (1980) kunye Iindwendwe (1982).
Iimpawu zeencwadi zikaJJ Benítez
KuJJ Benítez, imisebenzi yomphandi kunye nombhali idityaniswe kwenye. Olu dibaniso lubangele Umsebenzi obandakanya imibongo, izincoko, ifilosofi kunye neenoveli. Kodwa, ayisiyiyo kuphela malunga nokusebenza ngokuchaseneyo kodwa malunga nomthamo ochazayo, ubunzulu bohlalutyo kunye nokuphathwa kwesitayile ngokungqinelana neemfuno zoncwadi oluqwalaselweyo.
Ke, umbhali waseSpain ubonakala ekwazi ukuyigubungela yonke, kuba kwityala lakhe unenoveli yomcuphi kunye noxwebhu, Omnye umntu wayekhona (1977). Ukongeza, unomdlalo weTV, Iplanethi yomlingo, yahlelwa kwiziqendu ezilishumi elinesithathu ezazisasazwa phakathi kuka-2003 no-2004. Ngamanye amagama, uBenítez akanamda xa ebalisa amabali kwaye ebonisa inkxalabo.
Uluhlu lweenoveli zikaJJ Benítez
Imvukelo kaLusifa (1985)
UMope oBomvu (Ubuqaqawuli boMnquma(1992)
Intlekele enkulu emthubi (2020).
Ngenxa yohlobo lomsebenzi wophando owenziwe nguJJ Benítez, kusenokwenzeka ukuba akunakuphepheka ukuba kungabikho ndawo yokugxeka kunye nempikiswano emva kwesiqingatha senkulungwane yomsebenzi. Phakathi kwezona zityholo zibalulekileyo zezi ukhetho lomlobi lokubeka intuition yakhe kude nobungqongqo besayensi, nto leyo ayibona ingenakuphepheka.
Ngale ndlela, umbhali weNavarrese uchaze oko inika ixabiso kwiimvakalelo kunye nethuku njengenxalenye esisiseko yomntu. Ubuye watyholwa ngokukopela Incwadi yeUrantia. Ngokwenyani, isimangalo sasingenasiseko somthetho, ke ngoko, uBenítez wenza isimangalo (awasiphumeleleyo). Kufuneka iqatshelwe ukuba isicatshulwa ekuthethwa ngaso besikwindawo yoluntu ukusukela ngo-1983.
UJJ Benítez namhlanje
UJuan José Benítez ukwenze kwacaca kudliwanondlebe olwahlukeneyo ukuba iyaqhubeka nokuphanda kunye nokubhala iiprojekthi zohlobo olwahluke kakhulu. Kakhulu, kangangokuba kwinkqubo kamabonakude ye Isixhenxe (2020) uthe "Ndineeprojekthi ezili-140, ndiyazi ukuba andizukuzifeza." Inye into eqinisekileyo, uya kuqhubeka nokuthumela xa ethanda, kuba elinye lawona mabinzana akhe abalulekileyo ngala:
"Andibhaleli ukukholisa nabani na."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi zikaJJ Benítez